China Stair alloy 6 / 6B / 12 Bar / Welding Wesh vagadziri uye vanotengesa | Sekonic
Stellite chiwanikwa 6 / 6B / 12 Bar / Welding Waya
Stellite 6 C: 1 Kr: 27 W: 5 Co ： Bhar 43 1280-1390 Yakaomarara erosion-nemishonga alloy inoshandiswa zvakanyanya kune ese akanaka kuita kwese. Kuderera kwekutsemuka kupfuura Stellite "12 n akawanda masendimita, asi zvakapfeka zvinodzivirira kupfuura Stellite" 21 ir abrasion nesimbi kune mamiriro esimbi. Mamiriro akanaka emamiriro. Kwakanaka kukanganisa kuramba. Zvigaro zvemagetsi nemasuwo: ump shafts nemabheyaringi kudengenyeka kwenhovo uye rollina vaviri. Kazhinji inoshandiswa kuzvidzora. Inogona kushandurwa ne carbide tooling. Zvakare inowanikwa se tsvimbo, electrode uye waya.
Pashure: Haynes 25 Waya / Bhawa / Ringi / Gasket / Chigaro Mhete
Zvadaro: Stainless Simbi F55 Bar / Plate / Pipe
stellite 6 tsvimbo
stellite 6 yekutenderera waya
stellite 6b bhaa
Stellite 6b kutenderera bhaa
stellite 6b inogamuchira waya
stellite chiwanikwa Welding waya
Haynes 25 (Alloy L605-Co350) Welding Waya
Refractaloy 26 (R26) Bhar / Bolt / Ringi / Nuts
Shanduro yeAlloy / Stellite6 / Stellite 6B
stellite mhete, Haynes 25 Waya, Stellite 6, Welding waya, Stellite 6B, Chiwanikwa R26 bhaudhi,